Vidiyo: Mepụta vidiyo ndị a na - ahụkebe n'ịntanetị | Martech Zone
Video: Mepụta vidiyo na-aga aga na ntanetị
Saturday, December 30, 2017 Wenezdee, Machị 10, 2021 Douglas Karr
Anyị na-enyocha, na-edepụta ma na-emepụta vidiyo na-akpali akpali maka ndị ahịa anyị na ọ bụ usoro mgbagwoju anya. Ọ bụ ezie na ha nwere nlọghachi dị ịtụnanya na itinye ego, ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ike imefu ọtụtụ puku dollar na nnukwu ihe nkiri. Vidiyo.co azụlitewo ihe ngosi okike vidiyo nke ịntanetị iji nye ihe ngwọta dị ọnụ n'etiti.
Nwere ike ịnwale ikpo okwu n'onwe gị, na-eme vidiyo na-akpali akpali na otu ha ndebiri ha na-enye. Ndebiri gụnyere azụmahịa, emume, ngosi, e-azụmahịa, agụmakwụkwọ, ihe omume, ịkpọ oku, onye nkọwa, nchịkọta ego, ngosipụta ngwaahịa, vidiyo nkwado, ngosipụta ọrụ, slideshows, mmalite, stats, ma ọ bụ nkuzi. Ma ọ bụ i nwere ike ịmalite vidiyo gị site na ncha. Vidiyo.co na-ekerịta ndụmọdụ na aghụghọ na blọọgụ ha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ aka, Vidiyo.co na-enyekwa ohere ịnweta ndị eserese eserese na ndị nkiri.
Akaụntụ Video Na-ese foto
Vidiyo.co nwere ngwaahịa vidiyo na-akpaghị aka, maka ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịkọwapụta ma bipụta ọtụtụ puku vidiyo dabere na otu ndebiri.
Banye maka vidiyo
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Vidiyo.co
Tags: animated ememe videosanimation ngosi vidiyovidiyo e-commerce dị egwuvidiyo ecommerce vidiyoanimation agụmakwụkwọ vidiyoanimated omume videosanimated nkọwa vidiyovidiyo vidiyo na-aga agaanimated òkù vidiyoanimation ngosi vidiyoanimated ngwaahịa ngosi vidiyoanimated nkwado videosanimated ngosi ngosi vidiyoanimated ngosi mmịfe vidiyoanimation mmalite vidiyoihe nkiri Statistic videoanimated stats vidiyoanimated nkuzi videoanimated vidiyongwa ngosi vidiyoVidio azụmahịaVidiyo ememmeNgosi vidiyoE-Ahịa vidiyoMmụta vidioIhe omume vidiyonkọwa vidiyoNweta vidiyovidio ịkpọ òkùIhe ngosi vidiyoNkwado videoVidiyo ihe nkiriIhe ngosi mmịfe vidiyovidiyo mmaliteMbido vidiyoọnụ ọgụgụ vidiyovidiyo vidiyoNkuzi vidiyovidiyo
Liven: Weghara ma soro onye ọ bụla bịara na mmemme gị ọzọ